Neeta Dhungana - सेक्स ट्वाइलेट गएजस्तै नियमित
Topic: Neeta Dhungana - सेक्स ट्वाइलेट गएजस्तै नियमित
Author Topic: Neeta Dhungana - सेक्स ट्वाइलेट गएजस्तै नियमित (Read 25993 times)
« on: July 25, 2012, 09:45:30 AM »
सेक्समा उदार तर छाडा रुपमा प्रस्तुत हुनेक्रम बढीरहेको नेपाली रजतपटमा नायिका नीता ढुंगानाले सेक्सलाई रमाइलो ढंगले परिभाषित गरिदिएकी छिन् । हालै एउटा पत्रिकामा अन्तर्वार्ता दिँदै नीताले सेक्सलाई नियमीत ट्वाइलेट गएजस्तै भन्दै नियमीत सेक्स गर्नुपर्ने बताएपकि छिन ।
सेक्स प्राकृतिक आवश्यकता भएको निताको भनाइ छ । सेक्सलाई सामान्य रुपमा परिभाषित गरेपनि नीताले चपली हाइटपछि आफूलाई पनि यौनजन्य चलचित्रमा अभिनय गर्ने प्रस्ताव आएको तर त्यसलाई आफूले अस्वीकार गरेको बताएकी छिन् । उनले चलचित्रमा मात्र होइन, अन्य सञ्चारमाध्यममा पनि सेक्सलाई बढी फोकस गर्न थालिएको भन्दै अन्र्तवार्ताका क्रममा चिन्तासमेत जनाइन ।
चलचित्रमा मात्र होइन, अरू माध्यममा पनि सेक्सको वाहियात लाग्ने गरी चर्चा भइरहेको भन्दै सेक्स ट्वाइलेट जानुजस्तै प्राकृतिक कुरा भएको नीताले खुलस्त पारिन । ट्वाइलेट गएजस्तै सेक्स भन्ने निता कति ट्वाइलेट गइन भन्ने चाहिं अन्र्तवार्ताका पत्रकारले सोध्न छुटाए वा ट्वाइलेट धाउनाले सोध्न भ्याएनन त्यो भगवान जानुन ।
Re: Neeta Dhungana - सेक्स ट्वाइलेट गएजस्तै नियमित
« Reply #1 on: July 25, 2012, 09:45:39 AM »
« Reply #2 on: December 13, 2015, 03:15:23 PM »
« Reply #3 on: January 19, 2017, 12:43:49 PM »
चाँडै आउ है चलचित्रबाट नायिकाको रूपमा सिने क्षेत्रमा प्रवेश गरेकी नीता ढुंगानाले ‘छ एकान छ’, ‘मसान’, ‘नोटबुक’, ‘दबाब’लगायतका चर्चित सिनेमामा अभिनय गरेकी छिन् । चलचित्र ‘नोटबुक’को ‘गाला रातै…’ गीत हिट भएपछि नीता ‘गाला रातै केटी’ को नाम चिनिन थालिन् । उनले ‘अजम्बरी नाता’ र ‘मितिनी’ चलचित्रमा बालिकाको भूमिकामा अभिनय गरेकी थिइन् । हाल ‘रेस’ चलचित्र र म्युजिक भिडियो सुटिङमा व्यस्त नीताको ‘लेकसाइड’, ‘निर्भय’ र ‘पञ्चायत’लगायतका चलचित्र केही महिनामा प्रदर्शनमा आउँदै छन् ।
« Reply #4 on: January 19, 2017, 12:43:58 PM »
« Reply #5 on: January 19, 2017, 02:41:49 PM »
« Reply #6 on: February 09, 2017, 05:23:15 AM »
माया सकिएर टुट्यो – नीता ढुंगाना/नायीका
मङ्ल, मंसिर २८, २०७३ -
पर्दाभित्र होस् वा बाहिर अहिले नायीका नीता ढुंगाना चर्चाकै रहन्छिन् । लगभग दुई दर्जनको हाराहारीका चलचित्रमा आफ्नो पोख्त अभिनयसँगै उनको लोकप्रियता झन वढ्दो छ । हेटौंडा जन्मीएर हुर्किईन् र काठमाण्डौंलाई कर्मथलो वनाएकी उनी वालकलाकारकै रुपवाट यो क्षेत्रमा संघर्ष गरेकी नायीका हुन । आफ्नो प्रेम सम्वन्धका वारेमा केही समय खुलेआम सार्वजनिक गरेपनि पछि भने उनिहरुको सम्वन्ध धेरै समय टिकेन । प्रेमी आमेश र उनको प्रेमचर्चा नेपाली सिने क्षेत्रमा हट टपिक्स बनेको थियो कुनै बेला । हाम्रो माया जुनि जुनि लाई नीता को पहिलो चलचित्र हो । केही समय पछि गीति चलचित्र भाग्य र पन्चायत आउदै छ नीता को त्यसैको तयारीमा रहेकी नीता आखिर कस्ती नायिका हुन ? उनको जिवन र जिवन भित्रका केही पक्षमा रहेर रंगपोष्टले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ।
धेरै फिल्ममा काम गर्नुभो, चलचित्र शव्दलाई कसरी भरिभाषीत गर्नुहुन्छ ?
– मेरो लागि चलचित्र भगवान, मन्दिर अनि पुजा सब थोक हो। किनकि मेरो कर्मथलो यहि हो ।
तपाईका लागी कस्ता खालका चलचित्र रोजाईमा हुन्छन् ?
– सबै खाले चलचित्र मन पर्छ । प्रायः देश भक्ती र समाज लाई सन्देश दिने र हाम्रो समाजले पचाउन सक्ने चलचित्र हरु मन पर्छन ।
एक समय आफ्नो प्रेमलाई निकै खुलाएर सार्वजनिक गर्नुभयो, पछि टुट्यो, कारण के हो ?
– माया सकिएर होला । केही समय का लागि थियो सकियो ।
प्रेममा विश्वास भएन कि मन मिलेन ?
– दुबै भएन त्यही कारण होला । माया र बिश्वास दुबै प्रेम का प्रतिक हुन । हामी बिच त्यो हुन सकेन त्यसैले मन मिल्न सकेन ।
प्रेंम गरेर वर्वाद भयो करिअर भन्ने लाग्दैन ?
– लाग्दैन । प्रेम मा समय र उमेर कहाँ हेरिन्छ र हाम्रो माया प्लान गरेर लाएको माया पनि त होइन नी ।
शारीरिक बासनाले प्रेम खोज्छ कि प्रेमले शारीरिक बासना ?
– प्रेम गर्छु भनेर हुने र गर्दिन भनेर नहुने होइन । व्यक्तिसँग जब बिचार र भावना मिल्छ, तब दुई जनामा लगाब बढेपछि हुने कुरा हो । साँचो प्रेममा कोही छ भने, शारीरिक नजिकपना हुनु स्वभाविक हो र अर्को कुरा शरिर भन्दा अगाडि प्रेम आउँछ ।
« Reply #7 on: November 01, 2017, 07:34:49 PM »
For her role in upcoming movie ‘Panchayat’ actress Neeta Dhungana was awarded the Best Leading Actress Award in an international film festival.
In the festival held in San Francisco, California, Neeta was awarded the award in Foreign Film category.
« Reply #8 on: November 02, 2017, 06:07:59 AM »
« Reply #9 on: November 02, 2017, 07:06:53 AM »
Quote from: samir211 on November 02, 2017, 06:07:59 AM